Meydadka 64 ruux oo Itoobiyaan ah oo laga dhex-helay gaari xamuul ah - Worldnews.com
Meydadka 64 ruux oo Itoobiyaan ah oo laga dhex-helay gaari xamuul ah
ADDIS ABABA, Ethiopia – Mas'uuliyiinta ayaa xaqiijiyey in gobolka Tete ee dalka Mozambique laga helay meydadka 64 ruux oo la rumeysan yahay in ay yihiin muhaajiriin u dhashay Itoobiya.
Soo galootigaas meydadkooda laga dhex-galay gaari xamuul ah ayaa ka yimid waddanka Malawi, sidda lagu sheegay qoraal kasoo baxay taliska
Meydadka muhaajiriin Itoobiyaan ah oo laga helay Kunteenar dalka Mozambique
Meydadka muhaajiriin Itoobiyaan ah oo laga helay Kunteenar dalka Mozambique In ka badan 60 qof oo la tuhunsan yahay inay yihiin muhaajiriin aan sharci wadin oo ka yimid...
Qaran News 2020-03-25
In ka badan 60 qof oo la tuhunsan yahay inay yihiin muhaajiriin aan sharci wadin oo ka yimid dalka...
NAIROBI, Kenya – Laba qof ayaa la dilay mid kale waa la la'yahay kadib markii Al-Shabaab ay fiidnimadii Jimcaha jidka u galeen bas ku socdaalayey Mandera, magaalo ku dhow...
Gareowe Online 2020-03-14
Turkiga oo xabsi u taxaabay 50 qof oo ay Soomaali ku jiraan
ANKARA, Turkey – Konton qof oo ay ku jiraan Soomaali ayaa Talaadadii lagu xiray galbeedka Turkiga, sidda uu ku waramay Daily Sabax, oo intaas ku daray in dadkaas ay isugu...
Gareowe Online 2020-04-01
Rag bas ku dhex-kufsadey gabar ardayad ahayd oo la daldalay
NEW DELHI, India — Afar nin oo dil iyo kufsi ugu geystay gabar ardayad ah gudaha bas magaaladda Dehli sanadkii 2012-kii ayaa lagu fuliyey daldalaad. Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta iyo Mukesh Singh waxaa dil toogasho lagu xukumay sanadka markii uu ahaa 2013-kii. Xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Tihar ayaa lagu daldalay xalay. Fulinta xukunka dilka toogashada waa kii ugu...
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtey eedeynta ka timid Madasha Xisbiyada Qaran oo ahayd in gaari boolis ah uu rasaas ku furay xaruntooda ahna hoyga Shariif Sheekh Axmed. Shalay ayay ahayd markii ay soo ifbaxday dhacdadaas. Madasha waxay soo bandhigtay sawirro ay ku caddeyneyso sheegashada. War-saxaafadeedka ayay ku sheegeen in gaariga ka dambeeyay...
Sadex lagu dilay qarax xili Al-Shabaab ay aargoosi ka sameysay Kenya
IJAR, Kenya - Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay qarax culus oo maanta ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga. Isku duwaha gobolka, Nick Ndalana ayaa xaqiijiyay in weerarka uu ka dhashay qarax miino oo lala eegtay gaari Toyota Land Cruiser xilli uu ku safrayay Korahindi oo u dhaxeeya Sangailu iyo Hulugho. Darawalka gaariga iyo labo...
MUQDISHO, Soomaaliya – Degaankiisa kuma xoogana ururka uu ka barbar-dagaalamay ee Daacish, laakiin muuqaal uu ka arkay baraha bulshada ayuu u rogay xaqiiqo, waana meesha ay ka bilaabatay safarkiisa xagjireynta. Magaalooyinka Muqdisho, Garowe iyo Boosaaso ayuu u maray in uu kasoo muuqdo filinkii uu daawan jiray Facebook iyo Telegram, markii qof uusan magacaabin uu u soo diray...
Dalka Singapore oo ka mid ah meelihii ugu horreeyay ee uu ka dillaacay coronavirus, ayaa sirdoonka waxay baadigoobayaan dad qaba xanuunka si looga karantiilo. Bartamihii January, koox ka kooban 20 dalxiiseyaal ah oo ka socday magaalada Shiinaha ku taalla ee Guangxi ayaa Singapore u tegay inay ku qaataan sanadka cusub ee Shiinaha. Waxay booqdeen meelaha ugu quruxda badan ee loo...
Biixi: Cadow kusoo maqan Somaliland baa dilay taliye Cabdiqani Guhaad
HARGEYSA, Somaliland – Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka falceliyey dilkii xalay magaaladda Laascaanood loogu geystay taliyihii nabad-sugida iyo sirdoonka gobolka Sool. Biixi oo tacsi u diray ehelada, qaraabada iyo asxaabta marxuumka ayaa u rajeeyay in uu ALLE siiyo naxariista Janatul Firdowsa. Isagoo hadalkiisa sii wata, raggii ka dambeeyay...